Adeegsiga Sawirka ee Mawduuca iyo Saameynta uu ku leeyahay Bulshada, Raadinta iyo Ganacsiga
Khamiis, Juun 7, 2012 Arbacada, Juun 6, 2012 Jenn Lisak Golding
Dhowrkii toddobaadba mar ama wixii ka dambeeya waxaan ku caayayaa madaxdayda si aan ugu buuxiyo miisaaniyadda sawirka saamiyada. Ma jiraan qayb ka mid ah waxyaabaha aan u qaybinno nafteena ama macaamiisheena oo aan haysan nooc sawir muuqaal ah, qaab muuqaal ah, ama qaab gaar ah loogu talagalay. Waan ognahay, on Martech Zone, in markaan doorano muuqaal weyn si aan uhesho ujeedkeena, booqdayaal badan ayaa aqriya, wadaag badan, iyo faallooyin badan oo ku saabsan waxyaabaha kujira Dadku waa mashquul maalmahan sawiraduna runtii waxay uqalmayaan kun eray markaad kobcinayso waxyaabahaaga.
Sawirradu wax walba way ka fiican yihiin. Taasina waa wax fiican, iyada oo la tixgelinayo sida dhowr isbeddel oo waaweyn loogu sameeyay adduunka warbaahinta bulshada ay hadda xoogga saaraan isticmaalka sawirro tayo sare leh waxyaabaha ku jira. Marka intee in le'eg ku darista sawirrada mawduucaagu waa muhiim? Waxaa laga yaabaa in badan oo ka badan intaad moodeyso.
In kasta oo aan ognahay inay run tahay Martech Zone, dhab ahaan waxaa jira caddeyn muujineysa in sawirada runti ay fure u yihiin guusha marka la qorayo iyo la qeybinayo waxyaabaha ku jira shabakadda.
Waa Dhammaan Waxyaabaha Ku Saabsan Sawirada by Xayeysiinta MDG
Tags: Content Suuqadeegsiga sawirkaimagesInstagramistockphotoraadinta maxalliga ah